Umatshini wokuhambisa imali weServo Roll China Manufacturer
Inkcazo:Umatshini wokuhambisa umbane weSevro oZenzekelayo,Umatshini wokuhambisa ukutya weCoil Servo,Isongezo esiphakamileyo seServo
Home > Imveliso > Cinezela abaxhasi > Umxhasi weServo Roll > Umatshini wokuhambisa imali weServo Roll
Umatshini wokuhambisa imali weServo Roll
Umzekelo No.: RNC-100
Imveliso: 100 sets
Umatshini wokuhambisa umbane we-NC Servo Roll unokusetyenziswa kwimigca eyahlukeneyo yemveliso enje ngeemveliso zekhompyuter, ukubekwa kwamanqanaba eemoto, ukubekwa kwamacandelo eekhompyuter, umatshini wokucoca ioyile, ukubona umgca wokufaka isitampu, imipu yokucinezela, umtya wokucinezelwa kweradiya njl njl.
Name NC Servo Roll Feeder Machine
Max. Coil width 100mm
Feeding roller topΦ65mm, bottonΦ80mm
Coil thickness 0.2-3.2mm
Feeding length 0-9999.99mm
The Feeding line height 70-180mm
Feeding speed 20m/min
Release way Pneumatic
Servo motor Mitsubishi from Japan
PLC Mitsubishi from Japan
Man-machine interface WEINVIEW from Taiwan
Control way Electric control cabinet and hand switch box
Drive way Double geared
Shipping way Ocean shipping
Payment term T/T L/C Cash or other
Servo Driver Mitsubishi from Japan
Feeding way Automatic
Feeding control way Servo motor with PLC
Bearing Japan NSK
Air cylinder AirTAC, Taiwan
Big customer Honda, Haier, AUDI, DONGFENG, etc.
Ulawulo lwamanani oluchanekileyo oluchanekileyo lwenziwa ukuba lube khona ngolawulo lwe-PLC, ekusebenzeni ngokukhawuleza nangokuchanekileyo nangokuchanekileyo.
Uqwalaselo lwendlela yokutyisa yomtya we-NC servo
Inyathelo-1: Umatshini we-decoiler ngqoener, Ukulayisha iikhoyili kunye nokungasebenzi kunye nokuqinisa umtya we-Coil.
Inyathelo-2: Umatshini wesibonelelo se-NC Servo Roll, Imigca yekhoyili yokuxhasa umatshini.
Inyathelo-3: Umatshini we-pres onamandla kunye nezinto zokubumba, ucinezela kwimveliso yokuphela
Umatshini wokudambisa we-servo we-NC usetyenziswa ngokubanzi kumacandelo e-LED, ukunyathela iimoto, izixhobo zombane, iikhompyuter kunye neekhompyuter, izixhobo zekhompyutha kunye nezinto zentsimbi njlnjzi mveliso.
Umatshini wokuhambisa umbane we-NC Servo Roll udibana kumzi mveliso wethu kwaye ulungele ukuhambisa ePoland.
Inkampani yaseMayflay ngumenzi ophezulu ophezulu wazo zonke iintlobo zezixhobo zokuphatha i-Coil kunye nesixhobo sokuThinta eTshayina. Abavelisi booDoiler abahlukeneyo, abaLungelelanisi kunye neeServo feeders , kwaye banokubonelela uluhlu oluhle kakhulu lwe- combo 2 kwi-1 decoilers kunye nabaLungisiyo , kunye nemigca yeCompact Press feed eyaziwayo eya kunciphisa indawo yomgangatho kwaye iphucule ngokumangalisayo ixesha lokudibanisa kwiikhoyili ezinzima.
Inkampani kaMayflay ifunda itekhnoloji yaseJapan kwaye isebenzisa imigangatho ephezulu yemigaqo kulonyulo lwenxalenye, inkqubo yendibano kunye neendawo zokugcina, igxile ekuyileni nasekuboneleleni ngezisombululo ezinobuchule, ezisebenzayo ze- Coil processing Solutions kunye nezisombululo ze- automatic Stamping Line . UMayflay uphuhlisa itekhnoloji yokusika kunye nenkonzo yokujonga. UMayflay ubonelela ngesisombululo esinye sokumisa ukusombulula ingxaki yokondla i-coil strips kwi-media kakuhle, kwaye wandise imveliso kakhulu. Namhlanje, uMayflay lishishini elizinikeleyo elinezinto ezivelisa imveliso ezinesidima esifanelekileyo, ubuchule bobuchule, ulawulo lwanamhlanje, uthungelwano olubanzi lokuthengisa, kunye nentengiso enobuchule.
IMayflay ayiyona nto iphambili emhlabeni, kwaye ixabiso alikho elona xabiso liphezulu. Kodwa sinako ukubonelela ngeemveliso ezigqwesileyo ukufikelela kwiimfuno zakho kunye nokukunceda ukuba ufumane ezona zibonelelo zezoqoqosho.
Iinkcukacha zokupakisha: Ityala leenkuni
Ukuhanjiswa kweenkcukacha: Iintsuku zomsebenzi ezi-1 - 20
Indlela yokuhambisa: ukuhambisa inqanawa elwandle
1. Ngaba ungabonelela ngenkonzo ye-OEM / ODM?
Sibonelela ngeenkonzo ze-OEM ukulungiselela abo bakhuphisana nabo abavela kwilizwe laseYurophu kunye nenkampani yaseJanpan.
Inkampani yethu iqinisekiswe yi-ISO9001.Sifumene isiqinisekiso se-CE seemveliso.
kubandakanya umatshini wokuhambisa ukutya, umatshini wokudibanisa, umshini we-decoiler, umatshini wokushicilela isantya esiphezulu kunye nokunye.
3.Yintoni ixesha lokuhanjiswa komatshini wethu?
Okondlayo, umatshini ongafakwanga insimbi ngeentsuku ezili-1 ukuya kweli-20
Umatshini wokushicilela wesantya esiphakamileyo ziintsuku zomsebenzi ezi-5-35.
I-Decoiler straightener feeder 3 kumatshini omnye ziyi-15-65 zeentsuku zomsebenzi.
I-uncoiler straightener 2 kumatshini omnye ziintsuku zomsebenzi ezi-1-25.
Ngamaxesha athile, umatshini wethu unesitokhwe.
4.Yintoni ulawulo lomgangatho kwinkampani?
Sihlola umatshini ngokwe-ISO 9001 esemgangathweni size sivavanye umatshini ngaphambili.
ukuhanjiswa kwaye senza umatshini wethu ngezixhobo zeCNC kumzimveliso wethu. Oomatshini bethu bakumgangatho ophezulu.
Iikhathalo zomkhiqizo : Cinezela abaxhasi > Umxhasi weServo Roll
I-NC Servo Roll feed Qhagamshelana Ngoku
Amaphepha eServo e-Sheet Qhagamshelana Ngoku
Isibonelelo seNC Servo Roller Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa ukutya weServo Qhagamshelana Ngoku
Isondli seRoll Server Roll esizenzekelayo Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi weCoil NC Servo Qhagamshelana Ngoku
IiServo zeRoll Fees Qhagamshelana Ngoku
IiServo Roll feeders Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa umbane weSevro oZenzekelayo Umatshini wokuhambisa ukutya weCoil Servo Isongezo esiphakamileyo seServo Umatshini wokuhambisa umbane weCoil Zigzag Umatshini wokuhambisa umbane weCoil Umatshini wokuhambisa imali weServo Roll Umatshini wokuhambisa amandla weServo Umatshini wokuhambisa imali weServo